Budata Northrop P-61C Nwa Nwaanyị Black FSX & P3D - Rikoooo
Dean Crawford - DC Weebụsaịtị
DC Designs (Dean Crawford) n’enye anyi ebea add-on nke ike anaghari, ezigbo oru nke onye ọlaedo! Ndị obodo simmer nwere ekele nke ukwuu. Edebere ụgbọ elu a n'ụzọ niile, kokpiiti mepere emepe dị egwu, ụda na textures dị adị n'ezie. Ọ bụrụ na ụgbọ elu IIwa nke Abụọ na-amasị gị mgbe ahụ egbula nnukwu ihe a add-on.
ỊDỌ AKA NA NTỊ: Ọ dị mkpa ịgụ akwụkwọ ntuziaka DC "Atụmatụ P-61C MANUAL.pdf" achọtara na "Documents gị"
P-61 Black Widow bụ American Hunter nke Agha Ụwa nke Abụọ site n'aka Northrop Corporation. Ọ bụ ígwè ígwè, ígwè ejima, ejima-girder, nke dị n'etiti anụ ọhịa (ma ọ bụ nke ọkara), nke e mere maka ịbanye n'ime oge na ịchụ nta, nke USAAF na-eji n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Ọ bụ ụgbọelu Amerịka mbụ a kwadebere dị ka onye agha na-ebu agha n'abalị. (Wikipedia)
Onye edemede: Dean Crawford - DC Weebụsaịtị